Ukushintsha Kokushintshashintsha Kokukhangisa Kwendabuko Kanye Nedijithali Indlela Esizithenga Ngayo Izinto | Martech Zone
Ukushintsha Kokushintshashintsha Kokumaketha Kwendabuko Kanye Nedijithali Indlela Esizithenga Ngayo Izinto
NgeSonto, ngoFebhuwari 28, 2021 NgeSonto, ngoFebhuwari 28, 2021 UDiogo Voz
Imboni yezokumaketha ixhunyaniswe ngokujulile nokuziphatha kwabantu, onkhe, kanye nokusebenzisana okusho ukulandela uguquko lwedijithali esesibhekane nalo eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule. Ukugcina sibambe iqhaza, izinhlangano ziluphendulile lolu shintsho ngokwenza amasu okuxhumana ezidijithali nezenhlalo abe yinto ebalulekile ezinhlelweni zabo zokumaketha ngebhizinisi, kepha akubonakali sengathi imigudu yendabuko ishiywe.
Izindlela zokumaketha zendabuko ezifana namabhodi ezikhangiso, amaphephandaba, omagazini, i-tv, umsakazo noma amaflaya eceleni ukudayiswa kwe-digital kanye nemikhankaso yezokuxhumana esebenza ngokubambisana inikela ekwakheni kangcono ukuqwashisa ngomkhiqizo, incazelo, ukwethembeka, futhi ekugcineni ukuthonya abathengi kuzo zonke izigaba zenqubo yabo yesinqumo.
Ishintsha kanjani indlela esithenga ngayo izinto? Ake sidlule kukho manje.
Namuhla, ingxenye enkulu yezimpilo zethu yenzeka endaweni yedijithali. Izinombolo zicacile:
Ngosuku lokugcina luka-2020, kwakukhona Abasebenzisi be-intanethi abayizigidigidi ezingama-4.9 kanye nama-akhawunti asebenzayo ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4.2 kumanethiwekhi ezokuxhumana emhlabeni wonke.
Umhlahlandlela Wokuqala Wendawo
Njengoba imakethe eku-inthanethi yathuthuka, kanjalo namasu ezinkampani okuthengisa. Inguquko yedijithali yenze ukuthi kube lula ukuthi ama-brand ahlanganyele ngokushesha nangaphezulu ngqo namakhasimende, kanye nangama-internaut wokuqhathanisa imikhiqizo namanani, afune izincomo, alandele abenzi bemibono, futhi athenge izinto.
Indlela esithenga ngayo isola ukujwayeleka kokusetshenziswa kwe-inthanethi kanye nokuthambekela kwamadivayisi aphethwe ngesandla, njengokusebenzisana nezentengiselwano yomphakathi, ukwenza izinqumo nokuthenga kulula kunakuqala.
Imakethe Entsha, Ukumaketha Okusha?
Yebo, kepha ake sicacise.
Amasu wokukhangisa asebenzayo, ngokwesiko nangokwedijithali, asikisela ukukhomba izidingo zemiphakathi, ukudala ukunikezwa okukhethekile okuhlangabezana nalezo zidingo, nokuxhumana ngempumelelo namalungu ayo ukukhulisa ukwaneliseka. Yize ubukhona bemiphakathi online bungenakuphikwa, okwedijithali akuyona yonke into futhi kuyisiphetho sokumaketha.
Uma ungangikholwa, thatha Iphrojekthi Yokuvuselela iPepsi njengesibonelo. Ngo-2010, uPepsi-Cola wanquma ukushiya ukukhangisa okuvamile (okusho izikhangiso zonyaka zethelevishini zeSuper Bowl) ukuze aqale umkhankaso omkhulu wedijithali, ukuzama ukwakha ukuqwashisa nokuhlakulela ubudlelwano besikhathi eside nabathengi. UPepsi umemezele ukuthi bazonikeza izibonelelo ezingama- $ 20 million ezinhlanganweni nakubantu abanemibono yokwenza umhlaba ube indawo engcono, kukhethwe okungcono kakhulu ukuvotela umphakathi.
Mayelana nokubandakanyeka, inhloso yabo kwaba ukushaya! Kwabhaliswa amavoti angaphezu kwezigidi ezingama-80, Ikhasi likaFacsi likaPepsi uthole cishe izigidi eziyi-3.5 ukuthandwa, Futhi I-akhawunti kaPepsi kaTwitter wamukele abalandeli abangaphezu kuka-60,000, kepha ungaqagela ukuthi kwenzekeni ekuthengisweni?
Lo mkhiqizo ulahlekelwe cishe isigamu sezigidigidi zamaRandi emalini engenayo, yehla esikhundleni sayo sendabuko njengesiphuzo esiphambili sesibili eMelika saba sesithathu, ngemuva kweDiet Coke.
Kulesi simo esithile, imithombo yezokuxhumana iyodwa inike amandla uPepsi ukuxhumana namakhasimende, ukwenza ngcono ukuqwashisa, ukuthonya isimo sabathengi, ukuthola impendulo, kepha akuzange kwandise ukuthengisa okuphoqe inkampani ukuthi yamukele, futhi, isu lamasu amaningi elihlanganisa okwendabuko amaqhinga wokumaketha. Kungani kungaba njalo?
Isandla sedijithali nesendabuko esandleni
Imidiya yendabuko ayiphuli. Okumele kulungiswe ukushintshwa kwemicabango yokuthi indima yabezindaba yendabuko isebenzani nokuthi iyiphi indima yayo namhlanje.
UCharlie DeNatale, Ngaphezu kweFold's Traditional Media Strategist
Ngicabanga ukuthi lokhu bekungeke kube yiqiniso ngokwengeziwe, ngaphandle kwalokho, kungani sisazobona ngaphandle kukaMcDonald?
Noma sikubiza ngokwendabuko, ukumaketha okujwayelekile kwavela ngokusobala kusukela eminyakeni yobudala yegagasi yomsakazo namaphephandaba, kucabanga ukuthi manje sekuyindima ehluke kakhulu. Kuyasiza ukukhomba amalungu ahlukene omndeni, ukufinyelela izithameli ezithile ngamagazini akhethekile, izinhlelo ze-tv, namaphephandaba, kufaka isandla ekwakheni umuzwa wokuqina, ukuthembeka, nokujwayeleka komkhiqizo, nokwakha isimo esithandekayo njengawo kahle.
Njengoba idijithali ikhombisa ukuthi ibalulekile kumikhiqizo ukuze ihambisane nemakethe eguquguqukayo, okwendabuko kungaba yisikhali sokulwa nesikhathi sokunakwa kwabantu esinqamulelayo, okwenza kube nendlela yomuntu siqu, njengoba izinhlu zanyanga zonke ziyisibonelo se-. Ngenkathi abanye bengadinga onethonya lokunquma ukuthenga kwabo, abanye bangasho ukwethembeka okwengeziwe ku-athikili yephephandaba.
Lapho kusebenza ngokubambisana, izindlela zokumaketha ezidijithali nezendabuko zihlanganisa zombili izinhlangothi zamakhasimende, zifinyelela kumakhasimende angaba khona kakhulu angaholela ekuthengisweni okuhambisanayo nokuzimele ngenzuzo ekhuphukile. Ukuhlola okunye kukhuphula ithuba lokugcina izethameli ngaphakathi “kwebhola lomthelela” lomkhiqizo futhi kuthinte ngempumelelo uhambo lwesinqumo lomthengi.
Ukuba khona kwedijithali nezenhlalo eceleni kwamathuluzi eselula kubumba kakhulu indlela esithenga ngayo, kusunduzela ubuntu ekuthengeni nge-inthanethi, kepha impendulo yalolo shintsho ngamasu wokumaketha weziteshi eziningi, kufaka phakathi izindlela zendabuko ezinomthelela kuyo yonke inqubo yokutholwa. Ukuxhumana ngeziteshi ezahlukahlukene, izinkampani ziqinisekisa ukuthi kunzima kakhulu ukubaleka bubble yethonya lokho kungadala umthelela kunoma yisiphi isigaba sohambo lomthengi kusukela ekuvusweni kwesifiso kuze kube sekuthengweni kwangemva kokuthenga.
Tags: ngaphezulu kwesibayaUCharlie denataleukudayiswa kwe-digitali-pepsiiphrojekthi yokuvuselela i-pepsiSocial Media Marketingukumaketha kwendabuko
UDiogo ungusomakethi wedijithali ozimele othanda ukuhweba ulwazi nabantu abakule mboni. Uma ungamtholi efunda ngezindlela zakamuva zokumaketha, cishe uzomthola elalele ama-podcast noma esebenza kumaphrojekthi wakhe wokuklama.
Ngilungiselele Kanjani Izithombe Zami Ezifakiwe Kwizindaba Zomphakathi Kanye Nokukhuphula I-Traffic Yomphakathi ngo-30.9%